လမ်းပြကြယ်: ဂျပန်အမျိုးသမီးနှင့် ပတ်သက်၍ တရားခံအား သေဒဏ်ချမှတ် .
ဂျပန်အမျိုးသမီးနှင့် ပတ်သက်၍ တရားခံအား သေဒဏ်ချမှတ် .
Wednesday, 26 October 2011 16:05 ENVOY .. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် အသတ်ခံရသူ ဂျပန်အမျိုးသမီး Ms.Shiramatsu Chiharu နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၁ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်က တရားခံအား သေဒဏ် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အသတ်ခံရသူ ဂျပန်မလေးနှင့် ပတ်သက်၍ တရားခံမင်းသိုက် အား ကျောက်ပန်းတောင်းရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဥပဒေအကြံပြုချက်အရ ပုဒ်မ ၃၆၆၊ ၃၇၆၊ ၃၇၇၊ ၃၀၂တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ ၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၈ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက ကြောင်း သိရသည်။ "ကျွန်တော်တို့ တရားခံကို တရားစီရင်ချက်အမိန့်ချမှတ်ရင် ဂျပန်သံရုံးကို အကြောင်းကြားပေး လို့ ပြောထားတော့ ကျွန်တော်တို့ ကို လှမ်းအကြောင်းတာပါ။ ကျန် တာတော့ဘာမှမရှိပါဘူး"ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်သံရုံးမှ ဂျပန် အမျိုးသမီးအသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက် ၍ မြန်မာအစိုးရကို အကူအညီ နှစ်ချက်တောင်းဆိုခဲ့ရာ ယင်း တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ရုပ်အ လောင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ပေး ရန်နှင့် တရားခံအား အမှုစစ်၍ တရားစီရင်ချက် အမိန့်ချပါက အကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်း အချက်နှစ်ချက်လုံးအားဂျပန် သံရုံး သို့ အကြောင်းကြားပေးသည်။